६४.५ करोडको आइपीओ ल्याएको युनियनमा गोल्छासहित १३ व्यापारीको लगानी, कसको हिस्सा कति ? – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > ६४.५ करोडको आइपीओ ल्याएको युनियनमा गोल्छासहित १३ व्यापारीको लगानी, कसको हिस्सा कति ?
६४.५ करोडको आइपीओ ल्याएको युनियनमा गोल्छासहित १३ व्यापारीको लगानी, कसको हिस्सा कति ?
पोष्ट गरिएको असार. २४, २०७८ मा ११:३० बिहान असार २४, २०७८
प्रकाशित : 10:17 am, बिहीबार, असार २४, २०७८
काठमाडौं । युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको आजदेखि प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ) विक्रीमा ल्याएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता आइपीओ विक्रीमा ल्याएको हो ।
इच्छुक लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखा कार्यालयका साथै मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको सेयर विक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ ।
सञ्चालनमा आएको ४ वर्षमा २०५ शाखा उपशाखा विस्तार
युनियनल लाइफ इन्स्योरेन्स, कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत स्थापना भई बीमा ऐन २०४९, बीमा नियमावली २०४९ बजोजिम जीवन बीमा व्यवसायको कारोबार गर्ने कम्पनी हो ।
इन्स्योरेन्सले २०७४ असोज ३१ गते कारोबारका लागि स्वीकृति पाएको थियो । यस्तै, नियामक नियाक बीमा समितिबाट २०७४ असार २० गते लाइसेन्स पाएको थियो भने २०७४ असोज ४ देखि औपचारिक रुपमा बीमा व्यवसाय गर्दै आइरहेको छ ।
सञ्चालनमा आएको ४ वर्षको अवधिमा इन्स्योरेन्सले देशका सातै प्रदेशमा २०५ वटा शाखा उपशाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ । इन्स्योरेन्सको रजिष्टर्ड कार्यालय रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका ८ मा रहेको छ भने मुख्य कारोबार गर्ने कार्यालय काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको छ ।
कस्तो छ कम्पनीको वित्तीय अवस्था ?
२ अर्ब १५ करोड अधिकृत पूँजी रहेको इन्स्योरेन्सको जारी पूँजी पनि २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हाल १ अर्ब ५० करोड ५ लाख चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीले थप पूँजी वृद्धि गर्न ६६ करोड ५० लाख रुपैयाँको आइपीओ जारी गर्न लागेको हो ।
आइपीओपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब १५ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीमा संस्थापक सेयर होल्डरको स्वामित्व ७० प्रतिशत रहेको छ भने सर्वसाधरणको हिस्सा ३० प्रतिशत रहने छ ।
कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको कम्पनीको जगेडा कोषमा ७३ करोड ७ लाख रुपैयाँ संचित रहेको छ ।
कम्पनीले चालू आवको जेठ मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कुल बीमाशूल्क आर्जन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ५६.१६ प्रतिशतले धेरै हो । गत वर्षको सोही अवधिमा इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । नयाँ जीवन बीमा १० कम्पनीसँगको तुलनामा इन्स्योरेन्सको हिस्सा करिब ७ प्रतिशत रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा इन्स्योरेन्सको प्रतिसेयर आम्दानी ४.१७ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३७ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । कम्पनीले आगामी आव २०७८/७८ मा प्रतिसेयर आम्दानी ६.२३ रुपैयाँ र आव २०८९/८० मा ८.७६ रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
गत वर्षसम्म ७२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ संचित आय रहेको इन्स्योरेन्सले चालू आवमा ७८ करोड ५१ लाख, आव २०७८/७९ मा ९१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र आव २०७९/८० सम्ममा सञ्चित आय १ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ ।
कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्षमा संचित आय बढाउँदै लगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चित आय रहेको कम्पनीको आव २०७५/७६ मा २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ सञ्चित आय रहेको थियो ।
कम्पनीको आइपीओलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले ‘इक्राएनपी आइआर ट्रिपल बी (बीबीबी’ रेटिङ) दिएको छ । यसले कम्पनीको आधारभूत अवस्था र वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमता औसतमा मध्यम जोखिम रहेको भन्ने जनाउँछ ।
कम्पनीले आइपीओबाट उठेको पैसा कहाँ लगानी गर्छ ?
आइपीओ विक्रीबाट संकलन हुने ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये कम्पनीले नेपाल सरकारको ऋणपत्ररविकास ऋणपत्रमा १६ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा २५ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी, विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ९ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, वित्त कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र पब्लिक कम्पनीको सेयरमा ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
को/को छन् प्रमोटर सेयर होल्डर ?
कुल चुक्त पूँजीको ७० प्रतिशत संस्थापक सेयर स्वामित्व रहने इन्स्योरेन्स देशका
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओ आजबाट खुल्ला, असार २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने
आवेदन दिएको ४ वर्षपछि मैलुङ खोला जलविद्युतले पायो आइपीओ निष्काशनको अनुमति